Iminyaka engama-50 yamaphutha we-geostrategic ngabaholi base-Afrika - I-Afrikhepri Fondation
Funda: 15 amaminithi
Theumlando ugcina ukuthi iSivumelwano SaseRoma esasungula i-European Economic Community sasayinwa ngoMashi 25, 1957. Okungaveli ezincwadini zomlando ukuthi lesi siginesha ekuqaleni sasihlelelwe uMashi 21, 1957 nokuthi sahlehliswa izinsuku ezine. Yebo, izincwadi zomlando (zonke ezibhalwe ngabantu baseYurophu) azihlali kulomniningwane, kepha kubaluleke kakhulu kumuntu wase-Afrika. Ngakho-ke kufanele sifunde kuzinkumbulo ezishiywe ngabantu abathile abakhona kulo mcimbi ukuthola ukuthi usuku luhlehlisiwe ngezinsuku ezi-4 ngenxa kabhanana. Yebo, ngiyazi ukuthi kungakwenza umomotheka, kepha kubi kakhulu. Ngoba kungukuqala kwecebo lomhlaba wonke inhloso yalo eyisisekelo kwakuwukusimama komnotho wamakoloni, ngisho nangaphandle kwenkululeko yase-Afrika.Kuthathe izinsuku ezi-4 zokuxoxisana ukuthola ukuthi umnotho wemali ngokoloniyali, ekusebenzeni kwamazwe athile uzobekezela kanjani inyunyana entsha ekudalweni. E-Italy, empeleni kwakukhona umbuso owawuzimele wodwa kubhanana ovela koloni lwawo, eSomalia, naseFrance kusukela ngo-4, kwakukhona uhlobo oluthile lwethimba lokunikeza izwe ubhanana ovela kumakholoni ama-1932: iCameroon, i-Ivory Coast, iMadagascar, iMartinique kanye IGuadeloupe.
Ngakho-ke, ibhanana lembulwa kwi-ISivumelwano SaseRoma njengethuluzi lokulawula amazwe ase-Afrika, nangaphambi kokuba inkululeko yabo yabe isaziwa ngababulali bayo. Futhi ngoba ngonyaka we-1960, iFrance izophoqeleka ukuthi ibone ukuzimela kwamazwe amathathu okuqala, konke kuzokwenziwa ngendlela yokuthi kube ngabantu baseFrance abasele kulezi zindawo ezikude ukunakekela ubhanana, baqondise abantu bendawo maqondana izilimo ezinenzuzo kakhulu njengekhotini, ikofi kanye noshoko. Sizobona kanjani.
A- Inzuzo yebhanana
Ubhanana isithelo esinenzuzo enkulu emhlabeni ngoba sivunwa masonto onke futhi siqhutshwa unyaka wonke. Isivuno saso esiphumelelayo sikhuphuka sisuka kumathani angama-20 ihektha ngalinye likabhanana ophilayo eSenegal ngokusho kwezibalo ezinikezwe yinhlangano yabakhiqizi be-APROVAG i-APROVAG, iTambacounda eSenegal, iya kumathani ayi-60 ihektha ngalinye ezindlini zokugcina izithombo zaseMorocco, ngokusho kwezibalo ezinikeziwe. yi-Agronomic and Veterinary Institute uHassan II waseRabat eMorocco. Ngokuqhathanisa, ukhokho okhiqizwe ihektha ngalinye ngama-300 kg, ngokusho kwezibalo ezinikezwe yi-CNRA, Isikhungo Sikazwelonke Sokucwaninga Ngezolimo eCôte d'Ivoire, esivezwe nguMnu. Lancine Bakayoko ngomhla ka-27/10/2009, okungukuthi -ukusho ukuthi ngenxa yezinqumo eziyiphutha zezomnotho nabezombusazwe base-Ivorian, selokhu inkululeko-mbumbulu, umlimi we-cocoa wase-Ivorian ehlupheka izikhathi ezingama-200 kunomlimi kabhanana waseMoroccan. Kubi kakhulu nasekhofi. Ngokuya ngocwaningo olubucayi olwenziwe yi-IRCC i-Coffee and Cocoa Research Institute yaseCôte d'Ivoire, phakathi kuka-1969 no-1982, sithola endaweni yaseGagnoa isisindo esilinganiselwe esingu-180 kg sekhofi ehektheleni ngalinye. , lokho kusho ukuthi osomnotho kanye nabezombusazwe base-Ivorian banciphise abalimi baba ngamampofu ama-333 amabi kakhulu kunabalingani babo, abalimi baseMorocco. Sizothola isimo esifanayo cishe yonke indawo kwenye indawo eningizimu ye-Sahara e-Afrika.
B- I-geostrindows ye-banana
enikezwe yiLe Monde Diplomatique ngo-Okthoba 1996, nguGhislain Laporte, kwakhiqizwa amathani ayizigidi ezingama-52 ngo-1996 (amathani ayizigidi eziyi-100 ngo-2011). Futhi abakhiqizi ababili abakhulu, i-India ne-China, bakudla konke ukukhiqizwa kwabo. Okusele amathani ayizigidi eziyi-11 emakethe yamazwe omhlaba okungamathani ayizigidi ezi-4 aya e-European Union. Futhi u-2/3 wawo ulawulwa yizizwe ezimbili zaseMelika, i-United Brands Company (uphawu lweChiquita) neCastel & Cooke (brand Dole), neMexico: iDel Monte. Okunengekayo ngalezi zibalo yizinto ezimbili ezibalulekile: 1- Wonke amazwe angama-79 abizwa nge-ACP (e-Afrika, eCaribbean nasePacific) lapho i-European Union ibambe khona ithuba elingenakuphikwa ngomhlangano waseLomé, eCotonou. kucishe kuphindwe kabili (amathani angama-857.000) weziQhingi ezincane zaseSpain Canary (amathani angama-420.000). Ngokuphindwe kane ukwedlula iMartinique encane, enezakhamuzi eziyi-4 km1.100 kanye nezabantu abangama-2 abaphakele i-EU amathani kabhanana angama-382.000, emelene nabantu base-Afrika base-Sub-Saharan base-220.000 (izibalo zango-802).
I-2- Okubi kakhulu, inani lamanye amazwe e-79 ACP yingxenye eyodwa yesithathu yobuningi obunikezwe i-EU eNingizimu Melika, engazuzi izivumelwano ezifanayo, okungukuthi i-2,5 million tonnes.
It liphuma lezi 2 iphuzu, ukuzimisela ukuze ujike Afrika imikhiqizo inzuzo efana banana ukuthi kufanele lokhu logic njengoba luyingxenye wamakoloni (ngisho netholakala 50 neminyaka baqashelwa ukuzimela West Afrika), igcinelwe ukukhiqizwa emhlabathini wase-Afrika, kuphela kwabaseNtshonalanga.
Iphutha Abaholi base-Afrika kwaba ukuhlala kule logic koloni ukuba bakholelwe ukuthi kukhona elinye futhi iqiniso emhlabeni kunaleyo evela European Union kanye kuholele passivity Imininingwane okwakuyoholela, bekholelwa ukuthi n ' ikhona njengemakethe ye-EU. Ukuzivuselela ngokungahambi kahle, kwafika izinhlangano ezingekho ngaphansi kukahulumeni (NGOs), ezibizwa ngokuthi yizinto eziphilayo, eziye zadumisa ukuphuthuma kokulondoloza ihlathi lase-Afrika, kodwa indima yabo yangempela yayiwukuguqula amaAfrika ekusebenziseni kwalesi sikhala. kubalulekile ekudalweni kwemifino yemikhiqizo engabonakali yebhanana engaphazamisa ibhizinisi lebhanana elikhokhela kakhulu emakethe yomhlaba futhi liqinisekise ukuzimela kwezezimali kwe-Afrika. Lesi sibonelo sebhanana sibonakaliswa kakhulu ngalesi simo esiye saphambene namazwe afana neSenegal ayenqabe ukukhiqizwa kwawo kwangaphakathi kwebhanana ukuwafaka.
C- Kungani ubhanana?
Izikhungo eziningi zokucwaninga zivumelana ngokungafani kwemvelo enomdanso wesinkwa sebanana:
Ecebile nge-potassium, ubhanana ngumuthi wegazi. Kuyakhonjiswa futhi kulokho okubizwa ngemithi ehlukile yemvelo elwa nesilonda esiswini, isifo sohudo. Ecebile ngensimbi, ubhanana ushukumisa ukukhiqizwa kwe-hemoglobin, esiza ekunciphiseni i-anemia. Ubhanana uqukethe uvithamini B6, indima yawo ukulawula i-glucose egazini.
Ngisho nangaphandle kokuthunyelwa kwamanye amazwe, i-Afrika kufanele ibe nesisekelo esiphezulu sasekhaya sabasebenzisi bamabhanana, ngoba yini eyenza lesi sithelo sithande kakhulu yizinto eziphezulu eziqukethwe nge-vitamin C. i-banana nsuku zonke izanele ukuhlangabezana nezidingo ze-vitamin C zezingane zase-Afrika. Futhi kunomakethe omkhulu omkhulu e-Afrika ngokwawo, enikezwa izinga eliphezulu labantwabantwana kanye nesidingo samavithamini.
D- Ngabe ubuchopho base-Afrika buthule?
Esikhathini 55.000 amathani ubhanana idayiswa umhlaba wonke jikelele ngo 2010, 40% zakhiqizwa Asia, 27% eNingizimu Melika% 13 kuphela e-Afrika. Kukhona okuthiwa i-dessert banana, okungukuthi, ibhanana elidliwa njengesithelo, ibhanana elivuthiwe. Kodwa ngokusho izibalo olunikezwa FAO, e 1995 ke yenziwa emhlabeni 24.000 amathani ukupheka banana Green wathi, 17.000 amathani zavezwa e-Afrika, okungukuthi 71 futhi 4.000% amathani eNingizimu Melika , yi-17%. Ngakho-ke singaphetha ngokuthi uma Afrika musa ukuveza 13% we banana emhlabeni, akunjalo ngenxa yokukhubazeka kwabo kodwa passivity abo engqondo ukwazi ukuphulukisa izithakazelo kwezomnotho we West kusukela ukuthi Kuphathelene nokusebenzisana nemakethe; kodwa hhayi eyabo, ngoba uma kuziwa khiqiza ukudla, uma kuziwa ukufeza a isazela okusinda, bayishaya yonke amarekhodi zomhlaba. Ngakho singasho ukuthi ubuchopho Afrika kubonakala ukulala uma kuziwa ukukhiqiza ukudayiswa, ukudayiswa kwe-European Union. Bahlale ke ukunibonga iseluleko ngobuqili ayilungile ukuthi lavishes European Union, okungukuthi i-edumazayo ukukhiqiza ubhanana yokumaketha ngaphandle uma ngokugcwele ngaphansi kolawulo izinkampani Western efakwe e-Afrika.
Ngo 2007, 65% zikabhanana ithengiswe emakethe emhlabeni sivela emazweni ukuthi ubukade ikhofi kanye Champions abanale zombili izinkambu abhubhisa lelo balahlwe ikhofi, ukuya banana futhi-British kanye nema I-Costa Rica. Yilokho okwenza lowo nyaka 10 ukuthutha enkulu zikabhanana emazweni wonke, 7 babe besuka eNingizimu Melika, ngokuvumela kulesi sifunda ukulawula 95% we ubhanana akhishelwe khona umhlaba. Phakathi naleso sikhathi, abantu base-Afrika ukulungiselela ukugubha iminyaka 50 uzibuse, kodwa namanje nenkinga ukususa wamakoloni umyalo isibambo kuphela ikhofi, uphawuda ukotini, omunye ephathelene nemikhiqizo ye-eziyihlazo ukuxoshwa kwabantu base-Afrika eMelika phakathi namakhulu eminyaka e-4.
Ngo-1978, iMorocco yanquma ukuvimbela umsebenzi wokungenisa ubhanana. INkosi ibivele iqonde nje ukuthi ubhanana ungaba ithuluzi le-geostrategy ezandleni zombuso. Futhi ngaphandle kwezimo zezulu ezingezinhle ezifana (ngokungafani neCongo noma iCameroon), iSilo sinquma ukudala izindlu zokugcina izithombo ezihlome futhi ezilungele ukukhiqiza ngeziqeshana zamahektha ayi-1,53 ​​aqashwe ngentengo ehlekisayo kuzakhamizi zawo. IMorocco, engenise amathani kabhanana angama-24.000 unyaka nonyaka ngo-1978, kusukela ngo-1982 kuya phambili iyakwazi ukuhlangabezana nezidingo zayo zangaphakathi ezingeni ngaphambi kokuvinjelwa. Ngokombiko oshicilelwe oprofesa abathathu: uSkiredj, Walali no-Attir we-Agronomic and Veterinary Institute uHassan II waseRabat, osuka kumahektha ama-3 ekuqaleni komkhankaso ka-2/1980, saya kumahektha angama-81 2.700 ngo-1996 kanye namahektare angama-3.500 2011 ngo-100.000 , ngokukhiqizwa kwaminyaka yonke kwamathani angaphezu kuka-XNUMX kabhanana
E- Yini okufanele ngiyenze?
Inqubomgomo yokufinyelela kufanele ibe yinkimbinkimbi futhi ku-3 izinkomba:
I-1- 40% yebhanana eyenziwa e-Afrika i-rots ngokungabi namakethe angaphandle. Ukuze silungise lokhu, kufanele siqhubeke njengoba senze eMorocco: sithuthukise futhi sihlele imakethe yangaphakathi ngokuqoqa ngokuhlelekile yonke ibhanana-dessert etholakala kubakhiqizi abancane ukuze bahlale eMurisseries lapho amabhanana azovela khona emanzini afanayo ngesicelo semakethe yangaphakathi.
I-2- Ukugqugquzela ukukhiqizwa kwebhanana ngokudala amaphakheji amancane okutshala. Lena yindlela ewukuphela kokuhlukana nemikhuba yekoloni yokutshala amabhanana egqila okwamanje okwamanje, hhayi kuphela e-Afrika, kodwa naseMartinique naseGuadeloupe lapho isivuno sebhanana siqinile futhi kuphela ezandleni zenzalo yezigqila zangaphambili.
I-3- Ukukhiqiza, kufanele wazi ukuthi ungayithengisa kanjani. Imakethe yezindiza emhlabeni jikelele njengoba amathoyizi aphendukela kulogi ecacile ezweni ngalinye, umkhiqizo ngamunye kanye nesiko ngasinye. Omunye kumele abe nokuguquguquka kwengqondo ukuqonda ukuthi izwe alikhawulelwe kumazwe we-4 aseYurophu, noma ngabe ayona acebile kakhulu. Kukhona umkhawulo omkhulu kakhulu wokuthuthukiswa kwamabhanana emazweni amaningi afana neRussia, Iran, Turkey njll ...
Kukhona imakethe yangaphakathi e-Afrika okufanele ibanjwe, kepha ukuze ufike lapho, kufanele ivuselelwe futhi ikhiqizwe ukuze yanelise. Ukugwema isicupho samazwe amaningi emkhakheni wobhanana, kumane nje kudingekile ukubusa ngentando yeningi ibhizinisi likabhanana ngeziza ezincane ezingeqi kumahektha ama-5 futhi ngaphezu kwakho konke, ukuze uqiniseke futhi uqiniseke ukuthi abanikazi yibo kanye abasebenza nsuku zonke lamasimu. Lokhu kuzogwema inkinga ecasulayo yokuqagela umhlaba esiyithola emazweni athile lapho abomdabu behlikihla izandla zabo futhi benza izigqila ezivela kwenye indawo zisebenze, njengaseCôte d'Ivoire ikakhulukazi. Ngakho-ke umfelandawonye kumele ahlanganise kuphela abalimi abayingxenye yephrojekthi, futhi nguyena okumele abhekane nokunikezela ngezitshalo zokuqala zikabhanana kubalimi. Kungaleso sikhathi-ke lapho okumele kube nguyena ophethe ukulawulwa kwekhwalithi nokuhambisana namazinga wamazwe omhlaba wezokuthuthwa kwegesi nolwandle, ukumboza kuqala imakethe yezwe bese kuba eyamazwe omhlaba.
Namuhla, inzuzo yangempela yebhanana isekusabalaleni. Ayikho inqubomgomo eyogcwaliseka futhi isebenze ukuze abalimi bethu bangabikho kosizi lwekhofi, i-cocoa nekotini uma kungacabangi isidingo sokudala izidumbu ngokuqondile emadolobheni amakhulu amazwe ethu ukuze kutholakale uhlobo okubizwa ngokuthi "ukuma". Kule ntengo ukuthi kuyokwazi ukuvimbela ubuthakathaka obuthile bokuntuleka kokuncintisana kwebhanana lase-Afrika, isikhathi eside kakhulu sasilokhu sinengqondo yokuqothulwa komhlaba jikelele kwezwekazi lase-Afrika ngabaseYurophu. Ukumisa ingqikithi yekoloni yamasimanje wamanje, kuyodingeka ukuthi ufike ekushintsheni kulaba abanikazi abancane futhi ugweme noma yikuphi ukuxhashazwa okuqondile yizinkampani zangaphandle. Kule ntengo esizophumelela ukubuyiswa kwangempela kokuwa kwezithelo ezidliwayo kakhulu emhlabeni, ibhanana. Lokhu sekuvele kwenzeke emazweni amaningi aseNingizimu Melika lapho, ngokungafani ne-Afrika, ohulumeni baye baxoxisana ukuba baphoqe izinkampani zamazwe angaphandle emkhakheni ukuba bayeke ukuzikhiqiza, bathenge amabhokisi abo asebhanana ngokuqondile kubalimi. .
Isibonelo sombambiswano we-APROVAG (inhlangano yomkhiqizi, i-Tambacounda) esifundeni saseMisrarah eSenegal, kubonakala kuthakazelisayo ukukhomba nokuvumelanisa kwenye indawo e-Afrika. Bazihlela bona bazinikele i-16% yomhlaba wabo, okungukuthi i-0,25 yamahektheri angu-1,63 womlimi ngamunye,
inani lamahekthela angu-250 anikezelwe ubhanana obukhulayo, ukuba nemali. Ngo 2008, ukukhiqizwa kwaba 5.000 amathani (nge ukulahlekelwa 20% ngenxa yokuntuleka yokuvuthwa kanye 5% sokudliwa abalimi ngokwabo), wokubambisana sekudayiswe 4.000 amathani ubhanana, eqaphela a Bonanza 640.000.000 encane CFA (€ 975 760) leli nani labantu emzaneni kulinganiselwa ngaso cishe 52 845 izakhamuzi, wabeka nenetha inzuzo wekhasi: 1 561 000 CFA ehektheleni emiphakathini esezindaweni zasemakhaya 3: Missirah, Dialacoto futhi Netteboulou. Lokhu wokubambisana amkhethile akuhlawulisi nokukhawulela umkhiqizo walo 20 amathani ehektheleni, ukuvikela impilo yamalungu ayo, ngubani sizilahlile umquba okuyinto luwumthombo oyinhloko ukungajabuli okuthiwa zezimboni kabhanana.
Ukukhula komzimba nokulondolozwa:
Ubhanana isithelo okuthiwa yi-climacteric, okusho ukuthi ukuvuthwa kwaso kungalawulwa ukunciphisa ukulahleka, nokulawula ukumaketha kwaso, ngenxa ye-acetylene noma i-ethylene, imikhiqizo ye imboni ye-petrochemical, etholakala ngegesi. Ubhanana oqoqwe kubakhiqizi abancane kumele ugcinwe ngokushesha ezitolo ezibandayo ezibizwa “ngamagumbi okuvuthwa”. Lapho, zelashwa nge-acetylene emazingeni okushisa athile kanye nomswakama osukela ku-18 ° C kuye ku-14 ° C ezinsukwini ezine zokuvuthwa noma ezinzile ku-4-6 ° C ukuze kugcinwe.
Ukubambisana okungadingekile kwe-G- ACP-EU ekunambithekeni kobukoloni
Eminyakeni eyi-50 ngemuva kokuqashelwa yi-Europe yokuzimela kwamazwe amaningana ase-Afrika, isikhathi kungenzeka ukuthi sesifikile ukwenza lokhu kukhululeka kuphumelele. Namuhla, amazwe ase-46 ase-Afrika asesimweni sokunqunywa kwengqondo, esingavezwa ngokucacile ngesibonelo sebhanana. Afrika kumele babe nesibindi ukuphuma intsha yakhe uthatha isinqumo olukhulu unilaterally nekwentela European Union ukuthi iphela zonke tricks ukuthi wayesekhawulile nokwelukiweyo ukulawulwa bese ubamba eyayigqilazwe . Isibonelo esibonakaliso kunazo zonke yiqembu elidumile elibizwa nge-ACP (i-Afrika Caribbean ne-Pacific) okufakazela ukuthi ukoloni akukaze kube ngaphezu kwesizathu esihle:
I-1 - Akubona abase-Afrika abazithathele isinyathelo sokudala. Okusho ukuthi iqembu elinjalo lingacatshangwa kuphela yizizwe zaseYurophu ukuze ziphendule izithakazelo ezikhethekile zaseYurophu. Futhi nje ukucabanga ukuthi bakwenzele izithakazelo zabantu base-Afrika bahlambalaza nakakhulu ukuhlakanipha kwabo. Kunoma yikuphi, isithombe se-Afrika siphume ngokuphelele.
2- Kuyinto normal abathintekayo 46 SSA amazwe ezingxoxweni ne-European Union, ngaphandle kwamazwe yeNyakatho Afrika, yize-European Union uye wahlanganisa bonke abantu kungakhathaliseki isihloko sempikiswano, noma yikuphi indawo.
indlunkulu 3- I-CPA e-Brussels, futhi 100% uxhaso yi-European Union, okuyinto akwamukeleki neze ngokuya lomfanekiso ofanayo, emazweni abakholwa ayesezimele iminyaka engaphezu kweminyaka engu-50 . Uma le ACP ingamazwe afanelekayo, kungani uchaza ukuthi isihlalo asikho kwelinye lamazwe alungu laleli bhizinisi elingokomthetho? Kwenzekani lapho izithakazelo zakhe zihlukana nalabo be-European Union? Iqiniso liwukuthi esibabayo kuba Afrika abaholi jostling ngoba lolu hlobo inhlangano, futhi bakholelwa ngobuqotho ngokungazi ukuthi ungawenza ngabo baziqambela, uzenzele ezintsha ukwakha injabulo futhi ukuchuma kwabantu bakubo. Isiphi isithunzi isikhulu se-Afrika esizizwayo lapho ehlala futhi esondliwa ngezindleko ze-European Union? Uhlobo lweqiniso lobufebe bezizwe zase-Afrika.
I-4- Uma ku-1973, i-United Kingdom ijoyina i-European Union, eminyakeni emibili kamuva, ku-1975, kunyuke ngokuyisimangaliso inani lamalungu ilungu le-ACP. Lesi simangaliso esincane singenxa yokuthi i-United Kingdom isilethe amalungu awo amakholoni okuthiwa "i-Commonwealth" edumile. Lokhu kuwubufakazi beqiniso lokuthi i-ACP yinhlangano yamakholoni futhi isebenza ngendlela ebonakalayo yamakholoni, ngoba amazwe anamathele kuwo asezingqondweni zabadali bayo, noma ngaphezulu noma ngaphansi kwamakholoni. Futhi i-Afrika izokwenza kangcono ukuhamba.
5- Ecuador ongelona ilungu ukuthi inhlangano enikeziwe e 2011, 40% zikabhanana akhishelwe khona emhlabeni wonke, cishe 5 000 000 amathani ubhanana dessert. Ukududuza okuthiwa i-ACP evikelwe ngenxa yokususwa kwayo yonke imakethe, i-European Union inikezele ukwabelana nge-79 Amazwe we-ACP, nxazonke ze-220 million euros, okusho ukuthi isilinganiso esingu-2,70 million euro ngamunye. Kuthiwani? Ukuxazulula inkinga? Mystery.
Isu le-regionalalization of ubudlelwane bamazwe omhlaba elahlelwa yi-European Union lihlose ukuqinisa futhi linciphise abalingani balo eningizimu yezwe abaye baxazulula ubuhlobo obungalingani beqembu elikhuluma ngomuntu oyedwa izwi futhi likhetha ngokufometha ngokusho kwezinhloso zalo kanye nezithakazelo ezikhethekile, ozakwethu njengabalingani njengeqembu le-ACP. I-Afrika kumele iqonde ukuthi amakhulu eminyaka yobugqila kanye nobudlova bekoloni ayinakuqedwa ngaphandle kokuqaphela kwangempela isidingo esibalulekile sokuphulukiswa kwengqondo ngalokhu esidlule, ukuzikhulula ngokwakho inkululeko. Yonke imiklamo, konke ukulungiswa okubizwa nge-ACP noma i-CEMAC, noma i-ECOWAS yizimiso zokufakelwa okuzinhloso kuphela zokuhlukanisa abantu base-Afrika nokuvimbela ukuvela kwe-United States of Africa
H- Iziphi izifundo zentsha yase-Afrika?
intsha Afrika kumele akwazi ukucela umbuzo obalulekile: kungani EU ehlukana yezwekazi lase-Afrika ngo-kwakubonakala amaqembu abangenangqondo kakhulu asisebenzi ngokwayo lezi amathiphu, isibonelo ngokwakha i-iqembu emazweni wangaphambili lamaKhomanisi EU, iqembu 6 owasungula amalungu EU, iqembu emazweni akhelene ulwandle Mediterranean kwi-European Union, i-Ukubuthelela Atlantic amazwe angamalungu e-EU ??? Inkinga yezomnotho eNtshonalanga ifakazela ukuthi ayikho izwe elicebile ngokuphelele noma izwe elihluphekile, kukhona abantu abacebile ekuqapheliseni izithakazelo zalo kanye nabanye abampofu kulokhu kwaziswa. Isitha kwezwekazi lase-Afrika, hhayi-European Union, kuba Afrika Ompofu lokhu sengqondo lapho abangaphansi lokho okuthandwa ukwenza proxy futhi ubone European football kazwelonke amaqembu oqondile ngisho uma akukaze kuboniswe yikuphi coaching amakhono yakhe, eqondisa yezinkampani ezinkulu zomphakathi, nakuba owawina lo lotto Afrika ayikaze wazibonakalisa umthamo wayo kusukela zero umphathi Qu etc ... yilokhu ezingaba yizizathu ukuthi amazwe abaphikelela ikhofi ebugqilini futhi cocoa ne ukubuyiselwa ka 180 kg ihektha banana okhohlwa bona ukungenisa, ngakho babekwazi ukufezekisa lokhu ngisho banana inzuzo encane yamathani angu-20 ngehektare? Akunandaba, uma iYurophu ishilo ukuthi yinto enhle yokwenza, yebo, kungenzeka ukuthi kufanele iqiniswe. Kungani bekungafani, ngoba ukhokho wakhe wayenamandla phezu kwami; ngoba ngisho nkulunkulu wakhe uthathe ubuNkulunkulu okhokho bami; ngoba isinkwa sakhe sikakolweni sithathe esikhundleni samadonti ami, isiliva, i-manioc; ngoba amagama akhe okuqala ashintshe imayini; ngoba ulimi lwakhe selithathe indawo yami; njengoba imali yakhe ithathe indawo yemayini; ngoba abongameli bakhe babulala i-mine; Ngabe-ke angeke angabi namanga lapho engikhetha abadlali bethimba lami likazwelonke? Ekunqumeni mina ukuthi ngimelwe ningathinti ihlathi ukuze ipulazi sami, funa izwe suffocates kusukela yokushodelwa umoya ukuthi livela ehlathini yami? Yena ngempela ulungise ukuzishaya isifuba uquketheni cocoa weluleka kimi ukuzoqhubekisela ngokwami ​​e isiko layo inkazimulo ezinye ushokoledi okunethezeka e Brussels, Paris noma eVienna. Uqinisile kunakho konke. Uma kungenjalo, ingabe ngiyinto evamile ngempela?
UJean-Paul Pougala uyisakhamuzi saseCameroon kanye noMqondisi weSikhungo seGeostrategic Studies yaseGeneva eSwitzerland
I-United States yase-Afrika (2012)
Ukuhlala Kule Khosi - Wayne Dyer (Audio)